Nkwenye FTC | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Ndị na-esonụ na-akọwa Federal Trade Commission Compliance for my Traffic Blog website.
Anyị na-agba mbọ n'eziokwu banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla anyị ji, kwadoro, ma ọ bụ na-ekwu okwu ọzọ na Blog okporo ụzọ m. Anyị na-agba mbọ ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị na nke ndị ọzọ, iji kwado ajụjụ, nkwado, na nlekọta ndị ahịa. N'otu aka ahụ, dịka anyị (na azụmaahịa ọ bụla ọzọ ziri ezi) nwere ike irite na ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke aka anyị, anyị nwekwara ike irite uru site na ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ (dị ka ndị na-ere ahịa ọ bụla) na My Traffic Blog. Tụkwasị na nke a, ebe ọ bụla ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike ime ka e nwee ike ị nweta ego, anyị na-agba mbọ ịnye data ziri ezi na nke bụ eziokwu, mana gosipụta eziokwu ahụ bụ na mgbanwe ndị na-emetụta nsonaazụ dị ọtụtụ na enweghị ike ịchịkwa nke na enweghị mmesi obi ọ bụla. Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ anyị ịnakwere ụkpụrụ nduzi na ihe chọrọ nke Federal Trade Commission (FTC) maka abamuru nke mmadụ niile, ma buru nke ahụ n'uche nye nkwupụta ndị a gbasara nkwụghachi ụgwọ na nkwụfu ego gbasara ego na ego.
Rịba ama na enwere ike ịme ka njikọ njikọta ihe mara na mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ njikọ mmekọ. Yabụ, iji nọrọ na nchekwa, ị kwesịrị iche na enwere njikọ njikọ ihe yana anyị nwere ike ịnata ụgwọ n'ime ego ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla maka ihe ọ bụla ịzụrụ n'ihi ịga na weebụsaịtị a, yana anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ naanị site na ịpị njikọ ọ bụla.
Otu ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ jikọrọ ma ọ bụ jikọtara na weebụsaịtị My Traffic Blog nwere ike ịbụ mmekọ mmekọ Amazon.com. Nke a pụtara na njikọ nke ngwaahịa na Amazon.com, yana nyocha na-eduga n'ịzụrụ, nwere ike ibute ọrụ a na-akwụ. Ọzọkwa, nkwupụta nke njikọ ihe a na ikike ịkwụ ụgwọ nwere ike ọ gaghị eme n'oge ọ bụla enwere ike. Iji nọrọ na nchekwa, chee na enwere njikọ ihe onwunwe yana ikike ịkwụ ụgwọ oge niile. Ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na echiche ndị na-adịghị mma ma ọ bụ na-enweghị isi, ngosi zuru oke na-achọ ịdọ aka ná ntị a.
Ikwesiri iche na enwere ike ịkwụ anyị ụgwọ maka ịzụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na weebụsaịtị Weebụsaịtị My Traffic nke anyị anaghị achịkwa, nwe, ikikere, ma ọ bụ ndị ọzọ na-achịkwa anyị. Edere ya n'ụzọ dị iche, ebe ọtụtụ mmadụ ghọtara n'ụzọ doro anya na ndị mmadụ n'otu n'otu na-ebi ndụ site na uru nke na-adịgide mgbe akwụ ụgwọ ụgwọ metụtara ịnye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha, opekata mpe enwere ike nwee onye nọ ebe ahụ na-anaghị aghọta na ndị ọzọ nwere ike "mgbakwunye" ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke onye ọzọ ma ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọrụ / onye nwe ya kwụọ ụgwọ maka inye aka gbasaa okwu gbasara onyinye ha. Naanị jiri ya tụnyere ndị na-ere ahịa. Ha adịkarịghị ewepụta ihe ọ bụla, kama ha na-etinye ego ha ijikọ ngwaahịa na ndị okike ọrụ na ndị ọrụ njedebe.
Ikwupụtala nke a, ị nweghị ike ịtụkwasị onye ọ bụla nke na-ahụ maka ọdịmma gị anya ma ọ bụghị gị. Yabụ, ịkwesịrị ịme nyocha nke gị mgbe niile na onyinye na ohere dị iche iche, ruo n'ókè nke na-ahapụ gị ahụ iru ala, na-arụsi ọrụ ike nke gị tupu ịzụrụ ihe ọ bụla ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla sitere na weebụsaịtị weebụsaịtị My Traffic ma ọ bụ nke ọzọ. Nke a bụ usoro nduzi dị ukwuu nke iburu n'uche:
Nke mbụ, na-arụ ọrụ mgbe niile site na ọnọdụ nke weebụsaịtị ọ bụla, gụnyere anyị na My Traffic Blog, ga-enwe njikọ njikọta na ngwaahịa ma ọ bụ onye na-eweta ọrụ, enwere ike ịkwụ ụgwọ n'ihi nzụta gị, belụsọ na ekwuputara ya n'ụzọ ọzọ. Ewezuga ihe ịzụrụ, rịba ama na ọbụlagodi omume gị nwere ike ibute ego ị ga enweta na weebụsaịtị a. Iji maa atụ, enwere ike igosipụta mgbasa ozi na weebụsaịtị Weebụsaịtị My Traffic nke a ga-akwụ anyị ụgwọ maka igosipụta mgbe ọ bụla onye ọbịa webụsaịtị pịa ha.
Nke abuo, ruo n'ókè anyi nwere mmasi n'inwe ezi mmekorita nke anyi na gi, anyi choro iketa oke nani onyinye ndi anyi kwenyere na o g'abara gi. Naanị n'ihi na anyị abụghị onye guzobere ma ọ bụ mmalite nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ, anyị agaghị egbochi ịmara gị onyinye a. Ọ bụrụ na ịnwere ike irite uru na ya, n'agbanyeghị na ị ritela uru na ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ nke anyị, anyị chọrọ ka ị mee nke ọma. Ya mere, anyị na-agba ezigbo mbọ iji gosi gị naanị ihe ndị anyị ji eme ihe n'onwe anyị, gbalịrị, ma ọ bụ nwee okwukwe na aha onye na-eweta ma ọ bụ echiche. Nwere ike ịtụkwasị obi na anyị na-eme mkpebi a dabere na ozi niile dị mkpa ma daba na oge akwadoro.
Nke ato, n'agbanyeghị eziokwu na ọ ga-abụ ihe na-abaghị uru ịkọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị ga-ahụ na-akụda mmụọ ma ọ bụ dị ala, ọ bụghị naanị na ndị mmadụ dị iche, mana ọ ga-ekwekwa anyị omume ịla n'iyi. Yabụ, iji kpachara anya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị kwenyere n'ezi ebumnobi anyị, ị nwere ike ịga n'ihu ma buru n'uche na ihe kpatara ego nke ịdepụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị iche iche nwere ike ịmetụta anyị. weebụsaịtị. Ọzọkwa, na nke ahụ, nke bụ eziokwu bụ na enwere mgbe ụfọdụ njikọ ndị ọzọ dị n'etiti ndị na-abụghị ego, dị ka isi obodo, ihe ọma, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe na-akpata mkpebi na-akwado ịkwalite otu onyinye. N'ihi nkwenye a, ị kwesịrị ịghaghachi ma ọ bụ dabere na ihe anyị ga-ekwu, kama naanị mepụta echiche nke onwe gị ka ị nwee nchekwa. N'ikpeazụ, buru n'uche na anyị nwekwara ike ịnweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'efu, onyinye, ma ọ bụ nyochaa ihe ndị ahụ kwa.
Akaebe banyere nsonaazụ ma ọ bụ arụmọrụ nke iji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ka enyere iji mee ka nghọta gị nwee maka onyinye. Ọ bụ ezie na a gbalịsiri ike iji hụ na ha na-eme ihe n'eziokwu, anyị na My Traffic Blog anaghị akwụ ụgwọ maka njehie na ihe efu. Ewezuga mmejọ mmadụ, ụfọdụ ndị nwere ike ịnye ụfọdụ ozi, dịka ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-eweta ngwaahịa / ọrụ. Nsonaazụ kachasị mma ejikọtaghị ya na mbọ kachasị mma, ịdọ aka ná ntị, ịdị uchu, na ihe ndị ọzọ, yabụ, nsonaazụ ndị egosiri enweghị ike, n'ụzọ ọ bụla, bụrụ nke a na-ahụkarị, nke a na-atụ anya, nke a na-atụ anya ya, nke nkịtị, ma ọ bụ nke ejikọtara na ahụmịhe nke onye ọrụ. ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla enyere. Enwere ike igosi nsonaazụ pụrụ iche site na weebụsaịtị anyị dị ka isi ihe, mana ị ga-ahụ maka nghọta na nsonaazụ gbara gharịị agaghị egosipụta ahụmịhe gị. Ewezuga ọnọdụ ahịa, ngwaahịa na ọrụ gbanwere oge. Ngwaahịa ochie nwere ike ghara ịdị irè. Ngwaahịa ọhụrụ nwere ike ọ gaghị enwe ndekọ ndekọ a pụrụ ịdabere na ya.
Ebe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike ibute ịkpata ego, a na-etinyekwa ihe nchebe ahụ gbasara iji akaebe. Na mgbakwunye, rịba ama na ọnụọgụ ego ọ bụla metụtara ya metụtara onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ rụpụtara nsonaazụ ndị ahụ, na enweghị ntụkwasị obi ọ bụla na ị ga-enwe ike ịkwalite otu, ma ọ bụ ihe yiri ya, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ iji nweta nsonaazụ yiri ya. Nsonaazụ ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị adị, nwere ike bụrụ nsonazụ nke ọtụtụ ọnọdụ dị mma nke ga-esiri ike ịmepụ, yabụ ị ga-aga n'ihu na ihe ọmụma na nsonaazụ gị nwere ike ịdị iche na nke ọ bụla ejiri na weebụsaịtị anyị.
Emere ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ iji dozie nsogbu. Mpaghara nsogbu a gụnyere iwu, ego, na ọgwụ. Anyị anaghị ekwu na anyị ga-adụ gị ọdụ n'okwu metụtara ego, ego, ma ọ bụ ahụike. Ọ bụrụ n’ịchọrọ nduzi n’agwaetiti ndị a, ị kwesịrị ịtụle inweta ndụmọdụ nke onwe gị n’aka ndị ọka iwu, ndị na-edekọ ego, ndị ọkachamara n ’ụtụ isi, ndị na-ahụ maka itinye ego na ego, ma ọ bụ ndị ọkachamara ahụike tupu ịme ihe ọ bụla. Onweghi ihe obula anyi nwere ike ikwurita na Blog Traffic Blog m, nke edeturu ma obu okwu ekwuru, a ga-ezube iji mebe udiri udiri a, ebe anyi ekwughi na anyi bu ndi okacha amara n’ime ihe ndi ahu. Assume na-eche ihe egwu niile maka omume emere, ọnwụ kpatara, mmebi a kwadoro, ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ sitere na iji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ejiri ụzọ ọ bụla jikọọ ma ọ bụ kpọtụrụ aha na weebụsaịtị a. N'ezie, mkpebi dị otú ahụ bụ naanị nke gị, ma ọ bụ nke ọzọ ekpebiri yana yana ndụmọdụ ọkachamara nke onye ndụmọdụ ị họọrọ.
Jiri Ngwaahịa na Ọrụ
Ihe ndị a bụ eziokwu ekwesịrị ịdụ gị ọdụ ma ọ bụrụ na ị bu n'obi iji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla:
Ọnụahịa akwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ gbanwere oge. Ọbụna ọnụahịa nke staples na ngwaahịa ndị bụ isi na-agbanwe, na enwere ọtụtụ ihe dịka nnyefe na mkpa, ire ahịa na ihe ndị ọzọ na-achọ inweta ahịa, na ndị ọzọ. Ọnụ, na uru, nwere ike ịbụ ezigbo ikwu. Nkà na ụzụ, ihe ọhụrụ, mmezi ngwaahịa, ịbanye ahịa, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ọ gaghị ekwe omume ịkọwa ọnụahịa "ziri ezi" maka ngwaahịa na ọrụ ọ bụla. Ndị na-azụ ahịa dị njikere na ndị na-ere ahịa dị njikere ikpebi ego ha ga-akwụ n’oge ọ bụla. You nabatara eziokwu ahụ bụ na nzụta gị gosipụtara njirimara nke uru gị n'oge nzụta, na ọnụahịa ahụ nwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata n'ọdịnihu.
Nsonaazụ ị nwetara dabere na ọtụtụ ihe. Ikike na omume na-aga ogologo oge maka ihe ịga nke ọma na ngwaahịa na ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ niche ọ bụla, ma ahụike ma ọ bụ ịkpata ego. Ọnọdụ, ahụmịhe, ikike ebumpụta ụwa, ụdị mmadụ, agụmakwụkwọ, itinye oge na nnọgidesi ike bụ ihe ole na ole. N'iburu smorgasbord nke mgbanwe dị iche iche, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi kọwaa ihe ị ga-eme na ụdị ọ bụla nke ntụkwasị obi ma ọ bụ eziokwu.
Inye-na-amị Ngwaahịa & Ọrụ
Ngwaahịa na ọrụ na-eweta ego na-erubere usoro ịdọ aka na ntị dị n'elu. Na mgbakwunye, agbanyeghị, enwere ihe ndị ọzọ anyị chọrọ ịkọwa na My Traffic Blog. N'adịghị ka arọ ọnwụ ngwaahịa ma ọ bụ ihe enyemaka onwe onye, ​​ụzọ esi enweta ego na-emetụta ahụike zuru oke nke akụnụba nke mmadụ na-arụ ọrụ. N'oge ego, ego na-aga n'enweghị nsogbu na azụmahịa dị mfe. N'oge a hụrụ ụkọ, egwu, ịda mba, ịda mba, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ, a na-emesịa azụmahịa. Enwere ike imetụta nsonaazụ site na echiche ahịa, dịka a na-ejikwa akụkọ mgbasa ozi ahịa ahịa ahịa gburugburu ụwa.
Ngwaahịa na ọrụ na-emepụta ego na ọrụ a zụrụ kwesịrị ile ya anya dịka ịzụrụ ihe. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịbụ itinye ego na azụmaahịa mmadụ, ọ bụghị ihe ezi uche na-adịghị na ya ịtụ anya na enweghi ike ịghaghachi azụ na ntinye ego ahụ, kwa otu. Ọtụtụ mgbe, ọganiihu azụmaahịa bụ njikọta nke ọtụtụ ihe, ụzọ, atụmatụ, na ihe ndị ọzọ. Ọ nwere ike isiri gị ike ịtinye ihe ịga nke ọma n'otu ụzọ ma ọ bụ ịhazi ya. Nke a adịchaghị emebi uru nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla enyere, ebe ọ nwere ike ịnwe mgbakwunye. Ma ọ bụ, ọ nwere ike ọ nweghị mmetụta. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike isiri gị ike ịkọ, ị kwesịrị ị na-arụ ọrụ n’echiche na nsonaazụ gị nwere ike ịbụ efu. Anyị anaghị ekwe nkwa, ị ga - emerịrị ihe ị nwere ike tufuo na ịzụrụ ihe ọ bụla ma ọ bụ site na Blog Traffic m.
Nweta & Ego Enweta
N'iburu n'uche ihe niile dị n'elu, na-adabere n'ụdị ọdịdị nke ngwaahịa na ọrụ na-eweta ego, enweghị ụzọ iji kwenye nsonaazụ nke ụdị ọ bụla. N'ihi ya, anyị na-ekwusi ike na anyị anaghị ekwe nkwa ego gị na ego ọ bụla, n'oge ọ bụla.
Dị ka azụmahịa ọ bụla ma ọ bụ itinye ego ọ bụla, arụmọrụ gara aga abụghị nkwa ma ọ bụ amụma nke arụmọrụ n'ọdịnihu. Akaebe ọ bụla ma ọ bụ ihe ngosi ndị ọzọ nke nsonaazụ bụ naanị maka ebumnuche ihe atụ na, agbanyeghị na agbalịrị iji hụ na ha na-eme ihe n'eziokwu, ha ebughị n'uche ịkọwa ma ọ bụ chee ihe nwere ike ime gị. Adviseddabere na ha dị ka nke a adụghị gị ọdụ.
Ọ ga-kwuru na "enwetakwa & ego" a na-edeziri ya na ebumnuche a kapịrị ọnụ. Ọ bụ ezie na ego nwere ike ịkọwapụta ego a na-enweta na nke ọ bụla na-achọ ma ọ bụ ndị ọ maara na ya, ego a na-enweta nwere ike ịbịa n'ụdị na-abụghị ego. Ndị a gụnyere ụfọdụ ụdị nke adịghị adị ma ọ bụ enweghị nhịahụ, ma si otu a na-agbanyeghị ngwa ngwa na ego ma ọ bụ usoro mgbanwe mgbanwe nkịtị. Yabụ, rịba ama na ụdị ụgwọ ọ bụla, gụnyere ego sitere n'ụdị na-enweghị ego, n'agbanyeghị nke ahụ, bara uru, bụ ndokwa ndị a.
Mmekọ & Ndị Ọzọ nke Atọ
Okwesiri ighota na anyi nwere ikike ichikota, ma si otua na anabata oru maka ya, ọdịnaya nke websaịtị My Traffic Blog nke anyi dere. Ihe nnọchi anya ọ bụla ndị ọzọ mere kwesịrị ka a ga-ewere prima facie na-akwadoghị. Nwekwara ike ịgụ, nụ, ma ọ bụ na-esonye na nkọwa banyere ngwaahịa na ọrụ ma ọ bụ onyinye anyị ọ bụla, ma were ya na ndị ahụ enyeghị ikike.
Ọ bụ ezie na ozi, n'ụdị ọ bụla, nwere ike ibili, n'oge ọ bụla, gbasara ngwaahịa na ọrụ anyị, enwere ike ịnwe oge mgbe nsonaazụ a sitere na mmekọ mmekọ. N'aka ozo, anyi nwere ike ikwe ka ere ahia na ndi ahia anyi site na ndi ozo, ulo oru, webusaiti, na uzo ozo, dika ndi na enye ahia na oru na eji ndi na ere ahia na ndi ozo ere ahia ka ha nye ha ihe.
Ikwesighi ịkọwa onyinye nke ndị ọzọ dị ka nkwenye site na nke atọ nke ngwaahịa na ọrụ ọ bụla. Kwesịrị, karịa n'ụzọ, lelee ya dị ka onyinye ịzụta ihe. N'otu aka ahụ, dịka e zoro aka na ya na mbụ, rịba ama na anyị enweghị ike ịchịkwa usoro ahịa niile nke ndị niile. Site n'iji saịtị nke “enyo”, ndị mmekọ na-enweghị isi ma ọ bụ ndị na-enwetaghị ikike, ụlọ mmekọ mmekọ, "tiered", were gabazie, na-eme ka ndị uwe ojii na-ejikwa nlezianya rụọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Anyị na-agba mbọ iji hụ na ndị mmekọ anyị na-agbaso amụma anyị ma na-anọchite ngwaahịa na ọrụ anyị dabara na ntuziaka anyị. Agbanyeghị, na My Traffic Blog anyị enweghị ike ịkwenye na ha ga-eme ya. Na-enwere onwe gị mgbe niile ịkọ akụkọ gbasara nsogbu ma ọ bụ mmejọ site na ozi kọntaktị anyị.
Nke ikpe azu, ma obughi opekata mpe, biko rịba ama na ọrụ anyị na ịkọtara gị ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ na nke abụghị nke anyị bụ naanị dịka "onye na-eme egwuregwu." Anyị anaghị enye nkwado ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa maka ihe ndị ahụ ma ị kwesịrị ịkpọtụrụ onye nwe ya ma ọ bụ onye na-eweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ahụ iji nwee ajụjụ ọ bụla na afọ ojuju gị tupu ịzụta.